यसरी बनाइँदै छ ‘कर्णाली’ मा पिच रोड — Arthatantra.com
Arthatantra.com > पूर्वाधार > यसरी बनाइँदै छ ‘कर्णाली’ मा पिच रोड
सिन्धुपाल्चोक । कालोपत्रे सडक त धेरै टाढा,धुले सडकसम्म देख्न नपाएका जुगलबासीले अबको केही वर्षपछि सफा र फराकिलो मात्रै होइन कालोपत्रे सडकमा यात्रा गर्न पाउँने भएका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकको ‘कर्णाली’ उपमा पाएको जुगल गाउँपालिकामा स्थानीय सरकारको अग्रसरतामा सडक फराकिलो मात्रै होइन कालोपत्रे समेत सुरु गरिएपछि बर्षेदेखिको यस क्षेत्रको सडक सपना पुरा हुदै गएको छ ।
गाढी चढ्नका लागि मात्रै होइन,सडक देख्नका लागि पनि गाउँबाट दुइ दिनको पैदल यात्रापछि मात्रै सडक देख्न र गाढी चढ्न पाउँने जुगल क्षेत्रका स्थानीयको आफ्नै घर छेउमा सफा,फराकिलो र कालोपत्रे सडक निर्माण हुदै गएपछि स्थानायी हर्षित भएका छन् ।
केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगमा जुगल गाउँपालिकाको सबै वडामा यतिबेला धमाधम सडकहरु फराकिलो गरेर निर्माण सुरुवात भएपछि जुगल गाउँपालिकाका स्थानीय खुसी छन् ।
जुगल गाउँपालिकाको पहलमा प्रदेश सरकारले गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म जोड्ने सडक फराकिलो र कालोपत्रे बनाउनका लागि गत वर्ष ५४ करोड ६० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेपछि जुगलमा सडक सपनाको सुरुवात भएको गाउँपालिका अध्यक्ष एवम गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
अब सडकको मात्रै होइन यस क्षेत्रको समग्र विकासको ढोका खोलीएको छ,विकासको पहिलो आधार सडक नै हो,त्यसैले केही वर्ष भित्र वडासम्म पुग्ने सबै सडक कालोपत्रे हुन्छ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
जलविरेलाई जिरो मानेर सुरु भएको साढे १० किलोमिटर सडक भने यही वर्ष कालोपत्रे गरेर सक्ने योजनाका साथ निर्माण व्यावसायीहरुले धमाधम काम गरिरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
जुगल गाउँपालिका ३ गुम्बा मा रहेको हेर्दे डरलाग्दो र असम्भव झै लाग्ने निमाडोलको भिर छोडेर बस्ती सम्म सडक लैजानको लागि अहिले तिव्र गतिमा काम भइरहेको छ । हामी यही वर्ष भित्र तेम्बाथान सम्म सडक लैजानका लागि टेण्डर प्रक्रिया बाट निर्माण व्यावसायी समेत छनोट गरिसकेका छौ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
एकदिनमै काठमाडौंवाट जुगल हिमाल
तेम्बाथान सम्म सडक पगेपछि राजधानीबाट सबैभन्दा नजिकै रहेको जुगल हिमालको बेसक्याम्पमा एक दिनमा नै पुग्न सकिने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । अहिले जुगल हिमालको बेसक्याम्प सम्म पुग्न तिन दिन लाग्छ । सडक पुग्दा जुगल हिमालसम्म पुग्नका लागि धेरै सजिलो हुने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई थियो ।
गाउँपालिकाको केन्द्र सम्म होइन नेपालकै अन्तिम मानवबस्ती भएको तेम्बाथान सम्म पनि गाउँपालिकाले सडक लैजानका लागि धमाधम काम गरिरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बलेफी गाउँपालिकाको जलविरे सम्म र जुगल गाउँपालिकाको जलविरे देखि ढाडे हुदै १२ किलोमिटर सडक यही आर्थिक वर्षमा कालोपत्रे सम्पन्न हुने अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । संघीय सरकारबाट बलेफी देखि ढाँडेसम्मको सडकलाई बैकल्पीक राजमार्गको मान्यता दिएपछि क्रमश सडक स्तोरन्नती हुने अध्यक्ष श्रेष्ठले विश्वास व्यक्त गरे । बलेफी देखि जलविरे हुदै तेम्बाथान सम्मको ६१ किलोमिटर सडकलाई संघीय सरकारले यो वर्ष मात्रै वैकल्पीक राजमार्गको मान्यता दिएको थियो ।
प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबाट मात्रै होइन गाउँपालिकाको आफ्नै स्रोत बाट समेत यो वर्ष केही वडा सम्म पुग्ने सडक कालोपत्रेको काम सुरु भएको गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
गाउँपालिकाले वडा जोड्ने सडक स्तोरन्नतीका लागि १ करोड २५ देखि बढीमा २ करोड ९५ लाखसम्म बजेट विनियोजन गरेर टेण्डर प्रक्रिया मार्फत सडक स्तोरन्नती सुरु गरिएको छ । प्रदेशसँगको सहकार्यमा वहुवर्षीय योजना बनाएर सडक स्तोरन्नतीको काम सुरु गरिएको गाउँपालिकाका योजना अधिकृत रामबाबु नेपालले जानकारी दिए ।
गाउँपालिकाले यो वर्ष वडा नम्बर ३ बाहेक अरु बाँकी ६ वडाकै कार्यालयसम्म पुग्ने सडक स्तोरन्नती लागि काम सुरुवात गरेको छ । वडा नम्बर १ को बासिम्लेदेखि महाभिर हुदै सेलाङ जोड्ने १ किलोमिटर सडक यो वर्ष कालोपत्रे हुदैछ । त्यस्तै वडा नम्बर २ को खुन्दुको गोल्चे,४ को सुनखोला,घुङा पाङताङ सम्म पुग्ने सडकको पनि टेण्डर प्रक्रियामाफर्त काम सुरु भएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
वडा सम्म पुग्ने सडक स्तोरन्नती गर्ने क्रममा वडा नम्बर ५ को ढाडे,राम्चे बराम्ची र ६ र ७ को याङलाकोट हुदै हगाम जोड्न सडक निर्माण सुरु भएको छ । बलेफी देखि जलविरेसम्मको वैकल्पीक राजमार्गको लागि केन्द्रीय सरकारबाट यो वर्ष ८ करोड र अर्थ मन्त्रालयबाट थप ५ करोड सडक स्तोरन्नतीका लागि बजेट आएको छ । यो बजेटको काम पनि केही हप्ता भित्रै सुरु गरिने गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
वैकल्पीक चक्रपथको अध्ययन सुरु
जुगल गाउँपालिकाले वडा नम्बर १ देखि ७ सम्म सबै वडालाई जोड्ने गरेर एउटै सडक सञ्जाल निर्माणको गृहकार्य यही वर्षदेखि सुरुवात गरेको छ ।
गाउँपालिकाको कार्यालय रहेको ढाडेलाई केन्द्र बनाएर गाउँपालिकाभरका सबै वडा र बस्तीलाई समेत जोड्ने गरेर सडक सञ्जाल निर्माण सुरुवात गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष होमनारयण श्रेष्ठले जानकारी दिए । यसरी जोडिने सडक सञ्जालबाट जुगल गाउँपालिकाको धेरै स्थानीयलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले दाबी गरे ।
गाउँपालिका केन्द्र ढाडे हुदै याङलाकोट,हगाम,हाप्रा राम्ची,घुङा,पाङताङ,खानी,तापगाँउ,पाङगरपु,गोण्डेगाउँ,लिदी,सञ्चगाउँ हुदै निम्लुङ,गोल्चे,किप्चे,,भोटेसेलाङ,सेलाङबासिम्ले हुदै ढाडे चक्रपथ सडकको पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर बिकले जानकारी दिए । यसरी सडक निर्माण हुदा गाउँपालिकाका सबै बस्तीहरुलाई जोडिने विकले बताए ।
यो सडक विस्तार हुदा जुगल क्षेत्रको समग्र पर्यटकीय महत्व र धार्मिक र सास्कृतिक क्षेत्रलाई समेत सहयोग पुग्ने गाउँपालिकाको दाबी छ । बजेटेको हिसाबले महंगो हुने भएपनि सडक निर्माणका लागि केन्द्र,प्रदेश र आवश्यक परेमा अन्तराष्ट्रिय दाताहरुलाई समेत अनुरोध गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष होमनारयण श्रेष्ठले बताए ।
२०७६ फागुुण २७ गते १६:३१ मा प्रकाशित
यी हुन् उत्कृष्ट बजार पूँजीकरण भएका १० कम्पनी, कुनको कति ? (सूचिसहित)
प्रधानमन्त्रीद्वारा राराबाटै देशबासीका निम्ति पहिलो सम्बोधन हुने, आखिर किन यसो गरिँदै छ ?
मर्जरपछि ग्लोबल आईएमई बैंकको शेयर कारोबार भोलिदेखि खुला हुने
मुख्यमन्त्री भेट्न धनगढी पुगिन अमेरिकी राजदूत